I-Keynote Apple, i-iPhone X, iMacOS ePhakamileyo yeSierra, kunye nokunye. Okona kulungileyo kule veki kwiSoydeMac | Ndisuka mac
I-Keynote Apple, i-iPhone X, iMacOS ePhakamileyo yeSierra, kunye nokunye. Eyona veki igqwesileyo eSoydeMac
Ngokuqinisekileyo le ibe yenye yeeveki eziphambili zeApple kunye neemveliso zayo. Ngeli thuba, ukongeza ekusungulweni kwe-iPhone 8 entsha, i-iPhone 8 Plus, i-iPhone X, iApple yokujonga uthotho 3 kunye neApple TV 4k, inkampani yaseCupertino yaqala ukwenza oko besikubukele kwiividiyo ixesha elide, IApple Park kunye neqonga layo laseSteve Jobs.
Iveki enkulu yabalandeli bakaApple abakubonile ukufika kwecebo elitsha ebesilibona kuthotho lwamahemuhemu iinyanga. Le veki kaSeptemba 11 izokuya kwiincwadi zembali zika-Apple njenge-iPhone X entsha kunye neApple Park.
Ukongeza kuko konke oku kukho ezinye iindaba ezinomdla ngokubhekisele kwisoftware kwaye oko kukumiliselwa ngokusesikweni kweMacOS High Sierra kulindeleke ukuba kulandele Septemba 25. Inguqulelo IMacOS 10.13 GM nayo ikhutshiwe kule veki yabo bonke abasebenzisi kwaye oku kucacile ukuba sikufutshane nohlobo lokugqibela. Ngecala lakho IOS 11 nayo iya kukhutshwa ngokusemthethweni kule nyanga.
Inkwenkwezi yengcaciso yangoLwesibini ngokungathandabuzekiyo yayiyimodeli entsha ye-iPhone, Ifowuni ye-X. Le smartphone intsha yongeza uninzi lwabasebenzisi beApple abafuna ukuyibona kunye nabanye hayi kangako. Imodeli entsha ishenxisa inzwa yeTouch ID yeminwe kwaye isebenzisa i-ID yobuso, inkqubo ethi ngokwe-Apple ikhuseleke ngakumbi kwaye isebenze. Isikrini se-iPhone entsha ngoku zii-intshi ze-5,8 kwaye ukususa izakhelo kuyishiya inkulu kancinci kune-iPhone 8 kwaye incinci kunemodeli eyi-8 Plus.
Ukuba uziva uthanda oko, unako phendula uphandoSisebenza iiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba kuqaliswe intetho ephambili malunga nokuthengwa kwe-iPhone X entsha.Kuwo umbuzo ucacile, Ngaba uza kuyithenga i-iPhone X entsha okanye hayi?
Okokugqibela yikhankanye loo nto Ukusukela ngolwesiHlanu we-15, phantse zonke iimveliso ezintsha ezinikezelweyo zinokugcinwa NgoLwesibini ngaphandle kwe-iPhone X entsha, ke ngoku unokufikelela ngokuthe ngqo kwi- Ukuthengwa kwangaphambili kwe-Apple TV entsha, i-iPhone 8 okanye i-8 kunye ne-Apple Watch Series 3 Ubulindele ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Keynote Apple, i-iPhone X, iMacOS ePhakamileyo yeSierra, kunye nokunye. Eyona veki igqwesileyo eSoydeMac
Ukuba uvavanye i-APFS kwi-beta kawonkewonke ngeFusion Drayivu, kuyakufuneka ubuyele kwifomathi ye-HFS +
I-Apple Pay iyaqhubeka nokwanda kwayo kwaye ngeli xesha inyukele ebhankini eDubai